စွယ်တော်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေစစ် | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
3 Replies	ဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်ခဲ့တာက (BC 623)ဆိုတော့၊ ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် ၆၂၃ နှစ် ပိုစောခဲ့သလို၊ မိုဟာမက် ပေါ်ခဲ့တာက(AD 570)ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓ က မိုဟာမက် ထက်လည်း နှစ်ပေါင်း (၁၁၉၃)နှစ် ပိုစောခဲ့တော့ ၊
ယခု တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့စွယ်တော်(သွား) ရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း(၂၆၃၃) နှစ်ရှိနေပါပြီ။
-အဲဒီလောက် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သွားအပေါ်မှာ သံသယမကင်းဖြစ်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကအဲဒီ့ သွားကို Genetic Engineering နည်းနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးလိုပါတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလို့ တရုတ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်တော့ သိပ္ပံပညာရှင်တို့စမ်းသပ်တွေ.ရှိချက်တွေကတော့
-အဲဒီသိပ္ပံတွေ.ရှိချက်ထွက်လာစဉ်မှာဘဲ အနောက်အုပ်စု အစိုးရတွေက သူတိုရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို စမ်းသပ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။
-ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကျော်သွားမှာကိုမဖြစ်စေချင်လို.ပါတဲ့။ အနောက်အုပ်စု/ အမေရိကန် နှင့် တရုတ် တို့ ပါဝါ ပြိုင်နေချိန်လဲ ဖြစ်နေတယ်လေ။
-သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုဟာ ဒီနေရာမှာကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ကောင်းမွန်နေပါတယ်🙂🙂🙂🙂🙂
From : Mg Lwan Wai
-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ဒီသတင်းကိုကြားရတာ ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသားမိမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျာ…
ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကျော်သွားအောင် ဆင့်ကဲ Share ပေးလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ !!!!!
This entry was posted in ကမ္ဘာ့သတင်း, ဘာသာရေး, မြန်မာသတင်း, News and tagged စွယ်တော်, ဗုဒ္ဓစွယ်တော်, Burma, Burma Update News, Myanmar, Myanmar Latest News, Myanmar Update News, Swal Taw on January 3, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
← မသိတာလား မသိယောင်ဆောင်တာလား အန်တီ
3 thoughts on “စွယ်တော်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေစစ်”	kosi June 11, 2013 at 11:27 am	သစ်ထူးလွင်ဆိုက်အားအထူးကျေးဇူ့တင်ရှိပါတယ်။
Reply ↓	kosi June 22, 2013 at 10:38 am	မြန်မာနှိင်ငံနဲ့ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသော
အချက် ၃ ချက်လမ်း ၂ လမ်းနဲ့ရှင်း
ဆက်လက်ပြီးလမ်း ၂ လမ်းကိုရှင်းပြပါ
Reply ↓	kosi June 28, 2013 at 8:38 am	ကျွန်တော်တို့တတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့်
ရဲ့လောဘ ဒေါသ မောဟတရားတွေဖုံး